Imfuno yokuhamba ibuyile kodwa isezantsi kakhulu kumanqanaba angaphambi kwe-COVID
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Imfuno yokuhamba ibuyile kodwa isezantsi kakhulu kumanqanaba angaphambi kwe-COVID
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Ukuvuselelwa kohambo lwamazwe aphesheya kufuna oorhulumente ukubuyisela inkululeko yokuhamba-ubuncinci, abahambi abagonyiweyo akufuneki bajongane nezithintelo.
Imfuno zohambo lomoya lwamazwe aphesheya kunye nasekhaya zibonise umfutho omkhulu ngoJulayi 2021.
Izithintelo zokuhamba ezibekwe ngurhulumente ziyaqhubeka nokulibazisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwiimarike zamanye amazwe.
Imfuno yasekhaya iyonke yehle nge-15.6% xa kuthelekiswa namanqanaba engxaki.
The Umbutho wamazwe ngamazwe oThutho loMoya (IATA) ubhengeze ukuba zombini iimfuno zohambo lomoya lwasekhaya kunye nolwasekhaya lubonakalise umfutho omkhulu ngoJulayi 2021 xa kuthelekiswa noJuni, kodwa ibango lihlale laphantsi kakhulu kwinqanaba le-COVID-19-bhubhane. Izithintelo zokuhamba ezibekwa ngurhulumente ngokubanzi ziyaqhubeka nokulibazisa ukubuyela kwimeko yesiqhelo kwiimarike zamanye amazwe.
Iyonke imfuno yohambo lomoya ngoJulayi 2021 (kulinganiswa kwiikhilomitha zabakhweli zerhafu okanye ii-RPKs) ibiphantsi ngama-53.1% xa kuthelekiswa noJulayi 2019. Olu luphuculo olubalulekileyo ukusuka kuJuni xa ibango belingama-60% ngaphantsi kwamanqanaba kaJuni 2019.
Imfuno yabakhweli bamazwe aphesheya ngoJulayi yayiyi-73.6% ngaphantsi koJulayi 2019, ibangcono ukwehla kwama-80.9% okurekhodwe ngoJuni 2021 kuthelekiswa neminyaka emibini edlulileyo. Yonke imimandla ibonakalise ukuphucuka kunye neenqwelo moya zaseMntla Melika zathumela ukwehla okuncinci kwii-RPKs zamanye amazwe (idatha yezothutho kaJulayi evela e-Afrika ibingafumaneki).
Imfuno yasekhaya iyonke yehle nge-15.6% xa kuthelekiswa namanqanaba engxakeko (ngoJulayi 2019), xa kuthelekiswa nokwehla kwe-22.1% okurekhodwe ngoJuni ngoJuni 2019. I-Russia yathumela ezona ziphumo zibalaseleyo kwenye inyanga, nee-RPK zenyuka nge-28.9% ngokuchasene noJulayi 2019.
“Iziphumo zikaJulayi zibonisa umdla wabantu wokuhamba ngexesha lasehlotyeni. Ukugcwala kwabantu basekhaya kubuyile kwi-85% yamanqanaba angaphambi kwengxaki, kodwa ibango lamanye amazwe lifumene ngaphezulu nje kwekota yemithamo ye-2019. Ingxaki yimilinganiselo yolawulo lwemida. Izigqibo zikarhulumente aziqhutywa ziidatha, ngakumbi ngokubhekisele ekusebenzeni kwezitofu zokugonya. Abantu babehamba apho babenakho, kwaye oko ikakhulu yayikwiimarike zasekhaya. Ukuvuselelwa kohambo lwamazwe aphesheya kufuna oorhulumente ukubuyisela inkululeko yokuhamba. Ubuncinci, abahambi abagonyiweyo akufuneki bajongane nezithintelo. Oko kunganceda kakhulu ekunxibelelaniseni umhlaba nasekuvuseleleni icandelo lezokhenketho, ”utshilo UWillie Walsh, uMlawuli-Jikelele we-IATA.